Sideen ku oggaan karaa haddii aan qabbo fayraska HIV? – Tips for refugees
Sideen ku oggaan karaa haddii aan qabbo fayraska HIV?
Lama sheegi karo haddii uu qof qabbo fayraska HIV.
Kaliya baaritaanka fayraska HIV ayaa midaasi sheegi kara
haddii aad ku qabtid fayraska HIV jirkaaga ama haddii aadan ku qabbin.
Waxaad ku samayn kartaa baaritaanka fayraska HIV meesha Gesundheitsamt (xafiiska caafimaadka).
Baaritaanka fayraska HIV waa mid bilaash ah oona qofku la oggaanin magaciisa.
Adigu ma ahan in aad bixisid wax lacag ah.
Adigu ma ahan in aad sheegtid magacaaga.
Dhakhtar ayaa kaa qaadi doona dhiig.
Kadibna fiirin doona fayraska HIV ee ku jira gudaha dhiigaaga.
Haddii aanan ku jirin fayraska HIV gudaha dhiigaaga, haddaba midaasi waa mid wanaagsan.
Haddii uu ku jiro gudaha dhiigaaga fayraska HIV, waxaad qaadan doontaa daawooyin.
Haddii aad qabtid HIV ama AIDS, waa in aadan weligaaga dadka kale galmo la samaynin adiga oo aan xirnayn kondom.
Haddii kale waxaad cudurka ku daaranaysaa qofka kale.
Text: AWO-Zentrum für Aidsarbeit Schwaben
Posted on October 18, 2016 October 26, 2016 Author editorialteamCategories Body & Sex - Körper & Sex
Previous Previous post: Anigu ma DOONAYO in uu igu dhaco cudurka HIV. Maxaan samayn karaa? Sideen u ilaalin karaa nafsadayda?
Next Next post: Aniga oo (13 sanno jir ah) waxaan dhiig ku arkay kastuumadayda hoosteeda. Miyaan Xanuunsanahay?